Bannaanbax Farmaajo looga dalbanayo soo-celinta Askarta ku maqan Eritrea oo ka bilowday Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Bannaanbax Farmaajo looga dalbanayo soo-celinta Askarta ku maqan Eritrea oo ka bilowday Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Bannaanbax Farmaajo looga dalbanayo soo-celinta Askarta ku maqan Eritrea oo ka bilowday Muqdisho
Waxaa magaalada Muqdisho goor dhoweyd ka bilowday bannaanbax lagu dalbanayo in dib loo soo celiyo askarta ku maqan dalka Eritrea.
Bannaanbaxa oo ay dhigayaan waalidiinta ay wiilashaasi ka maqan yihiin iyo dadweyne kale ayaa ka bilowday isgoyska KM4 ayaa dadku sitaan boorar lagu cambaareynayo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Waxay dalbanayaan inay xog dhammeystiran ka helaan wiilasha ka maqan mudod 2 sano ah, dinba loogu soo celiyo dalka, iyagoo ku dhawaaqaya ereyo ka dhan ah maamulka Farmaajo.
Arrintan ayaa ka danbeysay markii ay soo baxday warbixin ku saabsan xaaladda Xuquuqda Aadanaha dalka Eritrea oo lagu sheegay in ciidamo Soomaali ah oo tababarka u joogay dalka Eritrea loo qaaday Gobolka Tigray ee dalka Itoobiya.
Siyaasiyiin badan ayaa ka dalbaday madaxda dowladda Federaalka inay arrintan ka hadlaan oo xaqiiqada ka sheegaan, iyadoo weli aanay wax War ah kasoo bixin Hay’adahad Dowladda Federaalka.
Previous article“Tan keliya ayaa Farmaajo iyo Khayre ka reebi karta inay u tartamaan xafiis guud” Wasiir hore Cabdi F. Juxa
Next articleWasiir Dubbe: “Tababarka Ciidamadu waa Sir Qaran, Siyaasiyiinta Duniduna kama hadlaan…” Jawaabta Dowladda